Gaalkacyo oo khudaar u dhoofisa magaalada Muqdisho
Posted on May 13, 2016RBC, Wararka
Gaalkacyo (RBC Radio) Ganactada iyo beeraleyda khudaarta ee magaalada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka Mudug ayaa billaabay khudaarta ka baxda gobolka ee loo dhoofinayo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho,sida waxaa u sheegay Raxanreeb Safiyo Cali oo ganacsatada ka mid ah.
Horay khudrad laga keeno koonfurta dalka ayaa la keeni jiray deegaannada bariga ku yaalla,lakin hadda beera-leyda gobolka ayaa kor u qaaday beerashadooda,taaso la sheegay inay sabab u noqotay markan iyagu inay wax u dhoofiyaan koonfurta.
Diyaaradaha ka baxa maalin walba magaalada Gaalkacyo ayaa horay u qaada khudaar kala duwan oo loo iib-geeyo magaalada Muqdisho,waxaana ka mid ah khudaarta diyaaradaha lugu safriyo Basbaas iyo Kabsarta.
“Khudaar-tan beeraha magaalada Gaalkacyo ayaa laga soo gura,waxaana u iibgeyna Muqdisho,maalin walba,”sida waxaa u sheegtay Raxanreeb Safiyo Cali oo ganacsatada wax dhoofisa ka mid ah.
Mar an su’aalnay Safiyo sababta ay gudaha magaalada Gaalkacyo khudaarta uga dhoofiyaan looguna gadi waayay,waxay ku jawaabtay ” Lacago ka badan tan gudaha ayaa laga hela markan Muqdisho geyno khudaarta an dhoofineyno,”
Dhinaca kale,ganacsatada iyo beeraleyda koonfurta dalka ayaa iyaguna khudraada u dhoofiya dalalka dibadda iyo kuwa dariska ah,sida ay inoo xajiiyeen ilo madax banaan,taasina waxay u khasabtay ganacsatada inay iyaguna khudaarta ka keenayay magaalada Gaalkacyo iyo deegaannada kale ee dhul beeradka leh.
Wax-garadka iyo aqoon-yahannada ayaa markiiba walaac ka muujiyay khudradda dibadda loo dhoofinayo,taaso la sheegay inay sabab u noqon karto,dalka inay ka yaraato khudradda lugu dhex iibiyo.
“Ganacsatada iyagoo lacago badan firsanaya ayay dibadda wax u dhoofiyaan,lakin waxa laga dhexli karo isma waydiiyaan,waxaan usoo jeedinayaa gudaha dalka inay wax ku iibiyaan,”ayuu yiri Maxamuud Yuusuf oo cilmiga beeraha ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.